Seddexda macOS Monterey Astaamaha Aad Jeceshahay | Waxaan ka imid mac
XNUMX astaamaha MacOS Monterey Waxaad Jeceshahay
Dhawaan waxaan awoodi doonaa inaan ku raaxeysano nooca cusub ee macOS Monterey Waqtigan xaadirka ah waxaan ku jirnaa wejiyada beta, laakiin marka la xaqiijiyo dhacdada Apple, waxaan ku dhawaad ​​xaqiijin karnaa inay tusi doonto waxa noqon doona nidaamka hawlgalka cusub ee kombiyuutarada Apple. Saddexdaan hawlood ee nidaamka hawlgalka cusubi waa: Tabs Safari; Xusuusin Degdeg ah iyo Qaabka Diiradda.
1 Tababyada Safari ee macOS Monterey
2 Qoraal deg deg ah
3 Focus ama qaabka feejignaanta ee noocaan macOS ah
Tababyada Safari ee macOS Monterey
Apple waxay beddelaysaa habka tabs loogu soo bandhigo Safari 15. Markii hore, tabs ayaa ka hoos muuqday cinwaanka / sanduuqa Raadinta iyo Bar -ka La -jecel yahay. Tabyadu waxay hadda haystaan ​​booska ku jira sanduuqa Cinwaanka / Raadinta, taasoo u oggolaanaysa waxoogaa ka badan hal bog oo shabakad ah inay shaashadda ka muuqdaan. Waxay noqon kartaa mid waxtar leh haddii aad leedahay tabyo badan ayaa furan. Waxaad isku dayi kartaa astaantan cusub dhexdeeda Falanqaynta Teknolojiyada Safari.
UI -da cusubi waa daaran yahay, laakiin waxaa jira ikhtiyaar ah inaad u beddesho qaab -dhismeed aad loo yaqaan, halkaas oo cinwaanka / Raadinta sanduuqgu ku sii jiro dhexda oo tabyadu ay ka muuqdaan hoosta. Waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda: Arag> Muuji baarka tab oo gooni ah Safari waxay ahaan doontaa sidii aad waligaa ku ogeyd arrintan.
Qaabkan cusub ee biraawsarka, waad awoodaa badbaadi kooxaha tabs. Si loo abuuro koox tab, Waa inaad gujisaa menu faylka ka dibna dooro: Koox cusub oo tabs leh tirada tabs ee hadda furan.
Hadaad sameyso midig-guji koox tabs ah, waxaa jira dhowr hawlood oo aad waxtar u leh:
Nuqul xiriiriyaasha: Xulashada tani waxay abuureysaa liis sumadaysan, liis gareeysan oo ku yaal sabuuradda. Marka la dhajiyo, magaca kooxda tab ayaa ka muuqda cinwaanka liiska.
Qeybta hoose ee menu-gujinta midigta waa a liiska bogagga tab kasta. Waxaad dooran kartaa mid waxayna ku shuban doontaa daaqadda weyn.
Qoraal deg deg ah
Sida ugu dhaqsaha badan ee loo abuuro faylka qoraalka marka aadan isticmaaleyn faylka App -ka qoraalada. Markii la dhaqaajiyo, app Notes -ka ayaa si dhakhso leh ugu furmaya fayl cusub oo aad bilaabi karto adeegsiga isla markiiba.
Apple wuxuu ku daray Qoraalka Degdegga ah muujinta geeska ee macOS Monterey. Waxaan dooran karnaa geeska shaashadda iyo marka aan u dhaqaaqno cursor -ka geeskaas, Qoraal Degdeg ah ayaa la kicin doonaa:
Waan furannaa Nidaamka doorbidka.
Waxaan gujineynaa cGelitaanka xakamaynta.
Guji badhanka Dhinacyada hoose ee daaqadda qaabeynta
Waxaan ku arki doonnaa sawir matalaya shaashaddaada daaqadda badhkeeda, oo ay ku hareereysan yihiin afar menu oo soo-bax ah oo gees walba ah. Waxaan dooranaa gees in aan rabno inaan isticmaalno si aan u dhaqaajino qoraal degdeg ah.
Waxaan gujinaynaa menu-ka-soo-baxa geeska aad rabto.
Waxaan dooranaa Qoraal degdeg ah.
Waxaan siinaa in la aqbalo
Waxaa loo qaabeyn karaa had iyo jeer u samee fayl cusub qoraalada ama fur feylka ugu dambeeyay dookhyada app Notes -ka.
Focus ama qaabka feejignaanta ee noocaan macOS ah
Iyada oo Focus on macOS Monterey, waxaan u habeyn karnaa sidaas yaan lagu kala gooyn farriimaha deg dega ah, wicitaanada iyo digniinta. Tani waxay noo oggolaan doontaa inaan xoogga saarno waxa aan ku sameyneyno Mac. Sideen u dhaqaajinnaa?:
In bar menu, waxaan guji icon Control Center. Taasi labo ka mid ah furayaasha midabka madow iyo caddaanka.
Waxaan gujin karnaa Astaanta diiradda taasina waxay dhaqaajineysaa shaqeynta ilaa aad ka dejiso. Haddii aad rabto ikhtiyaarro dheeraad ah, waa inaan gujinaa calaamadda Focus ama falaarta.
Daaqaddu way isbeddeli doontaa daaqadda Focus.
Haddii aadan lahayn astaanta astaanta, waxaan dooran karnaa ikhtiyaar ku jira Ha ku dhibin cinwaanka. Haddii aad leedahay astaamo, waxaad dooran kartaa midkood.
Qalab waa la hagaajin karaa si aad si toos ah u dhaqaajiso:
Xulashada nidaamka diiradda iyo diiradda, waxaan gujineynaa Focus tab.
Tiirka bidix waa astaanteenna. Waayo abuuro astaan ​​cusub, waxaan gujinaa badhanka + ee ku yaal salka hoose. Daaqad soo-bax ah ayaa soo bixi doonta oo leh lix doorasho.
Haddaan dooranno Caado, waxaan dooran karnaa midab iyo summad si aan u awoodno inaan si dhakhso leh u ogaanno. Waa inaan ku magacawnaa magac berrinka ka hooseeya astaanta kore.
Waxaan riixnaa Kudar.
Waxaan u qaabeyneynaa sida aan u jecel nahay (ogolow xiriiro gaar ah, waa maxay codsiyada gaarka ah ... iwm)
In jir ah "Si toos ah u dhaqaaji », waxaan gujinaa badhanka +. Daaqad soo-bax ah ayaa soo bixi doonta waxaadna u baahan doontaa inaad doorato mid ka mid ah saddexda xaaladood:
Automation ku salaysan waqtiga
Iyada oo ku saleysan goobta
Ku saleysan codsiyada
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » XNUMX astaamaha MacOS Monterey Waxaad Jeceshahay
Apple, lambarka 1 ee daraasadda ku saabsan xiriirka dhow ee lala yeesho adeegsadaha inta lagu jiro aafada
Waxay u muuqataa in Apple aysan u baahnayn qof si uu u sameeyo Baabuurka Apple